Naanị isiokwu ị ga-achọ maka WordPress: Avada | Martech Zone
Ruo afọ iri, anọwo m na-azụlite omenala ma na-ebipụta plugins, na-agbazi ma na-emebe isiokwu ndị a na-emebu, ma na-eme ka WordPress dị mma maka ndị ahịa. Ọ bụrụlarị ihe na-agba agba agba gburugburu, enwere m echiche siri ike nke ukwuu banyere mmejuputa nke m meworo maka ụlọ ọrụ buru ibu na obere.
M na na na na-akatọ na-ewu ụlọ - plugins na gburugburu nke na-eme ka mgbanwe a gbanwee na saịtị. Ha bụ otu aghụghọ, na-etinyekarị oke nke ibe weebụ ma na-ebelata saịtị ahụ nke ukwuu. Imirikiti ọrụ anyị na-arụ mgbe anyị were ọrụ mmepe weebụ maka ndị ahịa na-ewepu koodu nwere ikike na nke na-eme ka saịtị ghara ịdị nwayọ kamakwa ọ na-egbochi ikike nke ụlọ ọrụ ịme mgbanwe na saịtị nke ha.
Nabata Okwu Fusions 'Avada
Okwu Fusion ejiriwo obi eziokwu wue isiokwu kachasị mma na nchịkọta mgbakwunye mụ na ha rụkọrọ ọrụ # 1 na-ere isiokwu nke oge niile, Avada. A na-emezi ya nke ọma na m na-etinye ya n'ọrụ maka saịtị m ọ bụla na ndị ahịa m. Onye ọ bụla n'ime ihe owuwu ahụ na-enye ohere mmezi pere mpe - ihe ịchọrọ ịgbachi iji zere onye ahịa ma ọ bụ onye editọ na-emebiga ihe ókè na-ahazi saịtị na iwebata nsogbu ndị chọrọ ọrụ ọzọ iji mezie.
Ha edebewokwa isiokwu ahụ iche na ngwa mgbakwunye ahụ, na-enyere mmadụ aka ịwụnye isiokwu ọhụrụ n'ezie - ma na-ejigide arụmọrụ rụọ ọrụ site na ntọala nke plugins. Na Isiokwu Avada mara mma, etolite etolite, ma dịkwa mfe ịrụ ọrụ. Soro ndị ahịa afọ ojuju 380,000 zuru ezu zụta isiokwu a dị ịtụnanya!
Lelee Ihe Nlereanya Avada
Anyị DK New Media Saịtị dị na Avada
Kemgbe m wuru saịtị Avada mbụ, ana m eji isiokwu a maka ndị ahịa anyị niile. Na, emesịrị m emelitere anyị DK New Media yana saịtị. Were a lee anya na otú mara mma na ọ bụ - na ọ bụ incredibly mfe ewu mgbe ịbụ n'ụzọ zuru ezu na-anabata.
Nhazi ndị dị site na isiokwu a enweghị njedebe, yana ọtụtụ narị ihe na ikike nke na-eme ka ọ bụrụ nrọ ka emejuputa. Enwere m mmasị karịsịa na m nwere ike ịchekwa arịa na ihe maka iji ụwa ọzọ na ibe ndị ọzọ na-eji Fusion Builder. Ọ bụ usoro zuru oke na-ewu ụlọ nke na-ewepụta usoro CSS na-arụ ọrụ n'ime saịtị ahụ kama ịdebanye peeji mega.
Fusion Builder Atụmatụ Gụnye
Njikọ Kọlụm Ejiri Ebube - Kama ịtinye otu kọlụm n'otu oge, ị nwere ike ịhọrọ họrọ ịgbakwunye usoro zuru oke nke kọlụm ọ bụla anyị na-enye site na ogidi 1-6.
Mebie ngalaba na akpa - Ghichaa otu akpa ọ bụla site na ịpị iji chekwaa ihuenyo ụlọ, ma ọ bụ daa ihe niile ozugbo n'otu ebe na-achịkwa mmanya.
Kpọgharia aha na akpa - Naanị tinye cursor gị na akpa akpa ma nye ya aha. Nke a na - enye gị ohere ịchọpụta ngalaba na ibe gị ọsọ ọsọ ma dịkwa nfe.
Dọrọ na Dobe Ihe Omume - Elements dị ka taabụ, igbe ọdịnaya, toggles na ndị ọzọ na-ekwe ka ihe karịrị otu mmewere ka eme nwere ike ugbu a n'ụzọ dị mfe reordered site dọrọ na dobe.
Aha aha maka umuaka umuaka - Ọhụrụ Fusion Builder interface na-anakọta isi aha nwa mmewere ị fanyere ma gosipụta ya maka njirimara dị mfe.
Ọrụ Ọchụchọ iji Chọta Ihe na Ihe Dị Mfe - Oghere ọ bụla, kọlụm, na windo mmewere nwere oghere ọchụchọ n’elu aka nri iji chọọ nfe ma chọta ihe ịchọrọ na naanị otu mkpụrụokwu.
Zụta Avada Theme Ugbu a
Ọ bụ usoro mara mma. Nke a bụ njirimara nke isi atụmatụ Avada:
Ngosi: Abụ m mpako Mgbakwunye maka Themeforest ebe Isiokwu Avada na-ere.
Tags: avadakacha mma wordpress isiokwuanọ nafusion wuongwakọta isiokwuonye na-ewu ibeisiokwungwakọta isiokwuWordPressisiokwu mkpado